परम छुट्टी ईमेल मार्केटिंग गाइड इन्फोग्राफिक | Martech Zone
परम छुट्टी ईमेल मार्केटिंग गाइड इन्फोग्राफिक
बुधबार, डिसेम्बर 7, 2016 बिहीबार, सेप्टेम्बर 24, 2020 जेन लिसाक गोल्डिंग
'छुट्टी मार्केटिंगको लागि मौसम हो, र हाम्रो ईमेल प्रमाणीकरण सफ्टवेयर प्रायोजक नेभरबाउन्सले सिर्जना गरेको हो अन्तिम छुट्टी ईमेल मार्केटिंग गाइड तपाईंको हेर्ने खुशीको लागि।
यो राष्ट्रिय खुद्रा संघको डाटा देखाउन जारी राख्नुहोस् कि खर्चहरू यस बर्ष बढ्दैछ, विशेष गरी अनलाइन र डिजिटल प्रयासहरू द्वारा संचालित। ईमेल मार्केटि particularlyले विशेष गरी ठूलो अंश खेल्दछ, र खुद्रा विक्रेताहरूले उनीहरूको सूचिलाई सफा र ताजा राख्नको लागि शीर्षमा रहनु पर्छ उनीहरूको प्रेषक प्रतिष्ठा र वितरण बचाउनका लागि।
२०१ holiday को छुट्टीको मौसमका लागि केहि चौंकाउने तथ्या :्कहरू:
Holiday २% छुट्टी किनमेल गर्नेहरू अनलाइन किन्नुहोस्।
यो गैर-स्टोर बिक्रीमा अनुमान गरिएको वृद्धि यस बर्षको छुट्टीको मौसम7- १०% हो।
२.27.3..XNUMX% आदेशहरू कालो फ्राइडेमा ईमेल मार्केटिंग द्वारा संचालित हो।
41% अनलाइन बिक्रेताहरूको नयाँ विक्रेताबाट खरीद गर्नुहोस्।
समग्रमा, संख्याहरू अनलाइन अन्तरिक्षमा वृद्धि हुन जारी छ, जुन मार्केटरहरूका लागि ठूलो समाचार हो।
शीर्ष ईमेल मार्केटिंग दिनहरू तपाईंले याद गर्नु हुँदैन
यद्यपि ब्ल्याक फ्राइडे र साइबर सोमबार आयो र बित्यो, तर अझै धेरै डिसेम्बरमा राजस्व लिन बाँकी छ। कोडलेस अन्तर्क्रियात्मक वास्तवमा एक ठूलो सँगै राखियो शीर्ष ईमेल दिन गाइड छुट्टीको मौसमका लागि, जसले प्रत्येक राजस्व अवधिलाई विच्छेदहरूमा विभाजित गर्दछ:
नोभेम्बर / थँक्सगिभिंग भाग
धन्यवाद दिन अगाडि २ दिन
धन्यबाद दिने दिन
धन्यवाद दिन पछि
साइबर सोमबार भाग
२ दिन पछि साइबर सोमबार
हरियो सोमबार भाग
हरियो सोमबार (डिसेम्बरमा दोस्रो सोमबार वा गत सोमबार क्रिसमस भन्दा कम से कम १० दिन अघि)
हरियो सोमबार पछि १ दिन
हरी सोमबार पछि Day दिन
के तपाईले अरू कुनै दिन देख्नु भएको छ बिदाको मौसममा अत्यधिक उच्च दरको साथ?
तपाईंको ईमेल अधिक आकर्षक बनाउनुहोस्
तपाईका इ-मेलहरू ठीक दिनमा पठाउँनु भनेको एउटा कुरा हो; निश्चित गर्नुहोस् कि उनीहरू अपील गरीरहेछन् पूर्ण अन्य कहानी हो।
नेभेनबाउन्सले "तपाइँको ईमेलहरू बेवास्ता गरी बेच्न" को लागी केहि राम्रो सुझावहरु प्रदान गर्दछ।
निश्चित गर्नुहोस् मोबाइलमा पनि अनुभव अनुकूल छ। कुनै पनि प्रकारको शपरका लागि निर्बाध शपिंग अनुभव बनाउनुहोस्।
यस छुट्टीको मौसममा भावुक हुनुहोस्; ती हृदयका तारहरूमा तान्न डराउँदैनन्।
एक अर्काको ईमेल र सामाजिक खेल बन्द। के मेसेजि consistent संगठित छ र के तपाई त्यसलाई अरु प्रचार गर्न प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ?
खण्ड प्रयोगकर्ताहरू प्रभावी रूपमा! उच्च क्लिक-थ्रु र ओपन दरहरू हेर्न यो एकदम महत्वपूर्ण छ।
समय भनेको सबै कुरा हो। चाँडै र अधिक बार खरीद गर्न ग्राहकहरू पाउन यी शिपिंग सर्तहरू र विकल्पहरू हाइलाइट गर्नुहोस्।
तपाईको इ-मेल भर कार्यहरूमा लगातार कलहरू समावेश गर्नुहोस्। के गर्ने भनेर प्रयोगकर्तालाई बताउनुहोस्।
मापन, परिष्कृत, दोहोर्याउनुहोस्। ईमेल मार्केटिंग गर्न लायक छैन यदि तपाईं परिणामहरू मापन गर्दै हुनुहुन्छ भने के काम गरिरहेको छ र के छैन।
तपाइँका सदस्यहरूको राम्रो सूचीमा रहनुहोस्
के हामीले नबर्नबाउन्सको बारेमा सब भन्दा मनपर्दछौं उनीहरूको ईमेल प्रमाणीकरण हो, जुन हामी हाम्रा ग्राहकहरू र साझेदारहरूको लागि आन्तरिक रूपमा प्रयोग गर्दछौं। यस मौसममा कुनै पनि छुट्टी ईमेल अभियानहरूको लागि तिनीहरूको # 1 टिप भनेको तपाईंलाई सूचिहरू सफा राख्नु हो! र राम्रो कारणका लागि।
नेभरबौंससँग नि: शुल्क खाता खोलेर र तपाईंको सूची विश्लेषण गरेर तपाईंको ग्राहकहरूको राम्रो सूचीमा रहनुहोस्। सफा सूचीले स्प्यामलाई टाढा राख्छ:
नि: शुल्क नेवरबाउन्स खाताको लागि साइन अप गर्नुहोस्
टैग: २०१ email ईमेल मार्केटिंग२०१ 2016 ईमेलहरूईमेल मार्केटिंग इन्फोग्राफिकईमेल प्रमाणिकरणईमेल प्रमाणीकरण सेवाछुट्टी ईमेल इन्फोग्राफिकछुट्टी ईमेल मार्केटिंगछुट्टी ईमेल मार्केटिंग इन्फोग्राफिकछुट्टी ईमेलहरू
Jenn Lisak Golding Wednesday, December 7, 2016 Thursday, September 24, 2020
जेन लिसाक गोल्डिंग
जेन लिसाक गोल्डिंग नीलमणि रणनीतिको अध्यक्ष र सीईओ हुन्, एक डिजिटल एजेन्सी जसले B2B ब्रान्डलाई अधिक ग्राहकहरूलाई जित्न मद्दत गर्न र उनीहरूको मार्केटिंग आरओआई गुणा गर्न मद्दत गर्न अनुभवी ब्याक अन्तर्ज्ञानको साथ धनी डेटाको मिश्रण गर्दछ। एक पुरस्कार विजेता रणनीतिकार, जेनले नीलमणि लाइफसाइकल मोडेल विकास गरे: एक सबूत-आधारित अडिट उपकरण र उच्च प्रदर्शन मार्केटिंग लगानीका लागि खाका।
छुट्टीहरूको समयमा तपाईंको मोबाइल अनुप्रयोग लोकप्रियता बढाउने सल्लाहहरू
वेबरोमिंग भनेको के हो? यो शोरोमिंग भन्दा कसरी फरक छ?